REMME: Ko blockchain ichatibvisa isu maLogins nemaPassword? | Martech Zone
REMME: Ko blockchain ichatibvisa isu maLogins nemaPassword?
China, Kurume 22, 2018 China, Kurume 22, 2018 Douglas Karr
Imwe yeanonakidza matekinoroji ndeye blockchain. Kana iwe uchida kuongorora kwe blockchain tekinoroji - verenga chinyorwa chedu, Chii chinonzi Blockchain Technology. Nhasi, zvakaitika kune iyi ICO, REMME.
ICO Chipo Chekutanga Mari. ICO inoitika kana mumwe munhu achipa varidzi vemari mamwe mayunitsi eiyo nyowani yemari yedhijitari kana crypto-chiratidzo mukutsinhana nekrispto mari seBitcoin kana Ethereum, mune ino REMME
Sekureva kweForbes, cyber mhosva inosvika $ 2 trillion na 2019. Mazhinji ekuputsa uku kunoitika kuburikidza nekurwiswa kwechisimba kwemazita emunhu uye mapassword. REMME tekinoroji inoita kuti mapassword asashanda, ichibvisa chinhu chevanhu kubva kuhurongwa hwechokwadi. Heino pfupiso vhidhiyo:
Uye isu tinoenderera mberi nekuona makambani makuru akabiwa pane avo vese data uye mushandisi password, ichipa nzira kune vabiridzi kuti vabe huwandu hwakawanda hwe data kubva kune imwe chete, yepakati dhatabhesi. Ine dhatabhesi yakaparadzirwa, izvi hazvigone kuitika - zvichiita nzira yakachengeteka kwazvo yekuchengetedza ruzivo rwakashata.
ne REMME, vashandisi vako havadi kuzadza mafomu kana kuda marefu, akaoma mapassword. Kuvimbiswa nekwanyore kamwe chete, chengeteka. Uye kunyangwe iko kubaya kunogona kusanganiswa pamwe nekusimbiswa kwechipiri.
REMME Yakatsanangura Zvimiro zvavo:
Hapana chitupa nzvimbo - Iko hakuna kudiwa kwechitupa nzvimbo - iwe unodzora rako ramangwana. Iine blockchain ichitsiva iyo сertification chiremera, kambani yako inochengetedza mari uye inova yakazvimirira.
Blockchains uye Sidechains - Iyo REMME sisitimu inogona kushandiswa nenhamba dzakasiyana dze blockchains uye sidechains. Unogona kusarudza mubatanidzwa wakasarudzika wekambani yako.
Dzora hunhu hwako - Kiyi yako yakavanzika iri, uye inoramba iri, chakavanzika chako chisingambosiya komputa yako. Pane kudaro, chitupa cheREMME chakasainwa nekiyi yako yakavanzika chinogona kushanda sekiyi yeruzhinji kune chero webhusaiti kana sevhisi.
Vashandisi vanogona zvakare kunyoresa nenhamba isina muganho emaakaunzi, ayo ane akawanda SSL-zvitupa. Chero nguva chero panguva yekupinda, ivo vanogona kusarudza iyo account yekushandisa.
Joinha REMME's Pilot Chirongwa
Shandisa Aya Matipi uye Zvishandiso Kukunda Yako Kushambadzira Basa rekutakura
Ads.txt uye Ads.cert Zvinodzivirira Sei Kushambadzira Kubiridzira?